Home » Akụkọ ndị ọbịa nke mba ụwa » USA Akụkọ Akụkọ » 2021 ebe kachasị mma njem njem ọkọchị US aha ya
2021 ebe kachasị mma njem njem ọkọchị US aha ya
Mpaghara Los Angeles bụ ebe kachasị mma na West Coast na mpaghara obodo Atlanta bụ ebe kachasị mma na East Coast.
Ugbo elu ụgbọ elu na-aga ebe okpomọkụ na-ewu ewu na-efu $ 293.73
Florida, Oklahoma na Texas bụ ụlọ kachasị elu ebe ezumike na US
Michigan na Pennsylvania nwere ọnụ ọgụgụ kachasị ukwuu nke ebe ezumike kachasị ewu ewu
Site na ogwu mgbochi COVID-19 nke ndị America niile na ọnụọgụ ndị njem kwa ụbọchị na-agafe site na nyocha TSA karịrị oge 10 dị elu karịa afọ gara aga, ndị na-enyocha ụlọ ọrụ njem taa wepụtara akụkọ banyere 2021's Best Summer Travel Destinations.
Iji nyere ndị njem aka ịhazi ezumike oge ezumike zuru oke, ndị ọkachamara jiri mpaghara metro 100 gafee isi ihe ngosi 42 nke mmefu ego na ihe ọchị. Nchịkọta data sitere na ụgwọ ụgbọ elu dị ọnụ ala karịa ọnụ ọgụgụ nke ebe nkiri na ikpe COVID-19.
Uzo elu njem njem 20 kacha elu
Uzoamaka Ibekwe 11. Washington, DC
2. Honolulu, HI 12. Ugwueke, MO
3. Ọhụrụ Orleans, LA 13. San Antonio, TX
4.Ikekere, TX 14. Wichita, KS
5. Atlanta, GA 15. Onyema, FL
7. Tulsa, OK 17. Okechukwu, FL
8. Los Angeles, AKA 18. Osimiri, CA
9. Oklahoma City, OK 19. Albuquerque, NZ
10. Little Rock, AR 20.Raleigh, NC
Mgbago ụgbọ elu na-aga ebe ezumike na-ewu ewu na-efu $ 293.73, na-ewe 3 awa na nkeji 44 ma nwee njikọ 0.3.
Florida, Oklahoma na Texas bụ ebe obibi kachasị elu oge ọkọchị na US, nke ọ bụla nwere mpaghara metro abụọ n'elu 15. O doro anya, Michigan na Pennsylvania nwere ọnụ ọgụgụ kachasị ukwuu nke ebe ezumike anaghị ewu ewu, nke ọ bụla nwere mpaghara metro abụọ.
The Orlando Obodo metro nwere ọnụ ala nke abalị maka ụlọ nkwari akụ nke kpakpando atọ, $ 32, nke dị okpukpu 4.9 karịa Santa Rosa, mpaghara metro nke kachasị elu na $ 157.